Daawo: Sarkaal Shiinees ah oo indhaha u shitay Saxafiyad katirsan aqalka cad lana socotay Obama - Hablaha Media Network
Daawo: Sarkaal Shiinees ah oo indhaha u shitay Saxafiyad katirsan aqalka cad lana socotay Obama
HMN:- Madaxweynaha dalka Mareeykanka Brack Obama, ayaa safarkiisi ugu dambeeyay asigoo madaxweyne ah ku maraya dal weynaha China, halkaas oo uu uga qeyb galayo shirka caalamiga ah ee G-20.
Hadaba sida uu daabacay warageyska Daily Mail, mid kamid ah saraakiisha Shiineeska ah ee loo xil saaray ilaalinta amaanka Obama, ayaa waxay isku dhaceen Gabar wariye ahayd kana tirsan aqalka cad ee Mareeykanka, taasoo kamid ahayd wafdiga Obama.
Sarkaalkan shiineeska ah ayaa isku dayay inuu Saxafiyada xoogaay ka dheereeyo Obama, balse waxeey ku cataawday iney ka tirsantahay aqalka Cad.
Sarkaalka iyo gabadha wariyaha ah ayaa is dhaafsaday ereyo kulul, gaar ahaan sarkaalka ayaa u sheegay in halkan wadankiisa ay tahay islamarkaasina amarkiisa uu ka shaqeeynayo.
Halkaan ka daawo wixii dhex maray: